Ugboro abụọ Hype 2 maka OSX: Mepụta ma kee HTML5 | Martech Zone
Ugboro abụọ Hype 2 maka OSX: Mepụta na HTML HTML
Umda Mmetụta bụ ngwa Mac OS X nke na - enye gị ohere ịmepụta ọdịnaya mmekọrịta na mmegharị na ọdịnaya HTML5. Peeji ndị ejiri Tumult Hype rụọ ọrụ na desktọọpụ, smartphones na iPads na-enweghị koodu achọrọ. Ị nwere ike zụta otu Tumult Hype 2 site na Storelọ Ahịa App rue Septemba 10 nke $ 29.99!
Hydị Hype (Mac OS X) nwere atụmatụ na mmekọrịta mmekọrịta, gụnyere:
eserese - Tumult Hype’s keyframe based animation system na-ewetara ọdịnaya gị ndụ. Pịa Record na Tumult Hype na-ele ihe ọ bụla ị na-eme, na-ekepụta keyframes na-akpaghị aka dịka ọ dị mkpa. Ma ọ bụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmasịkwu, jiri aka gị tinye, wepu, ma hazie igodo igodo iji mezie ọdịnaya gị nke ọma. Ọ dị mfe ịmepụta ihe okike site na ịpị na ịdọrọ na ụzọ mmegharị iji tinye isi ihe njikwa.
Oge usoro ihe nkiri - Enwere ike itinye usoro iheomume maka ebe a ma kpọọ mgbe omume sitere na ya. Ikike a na - enye gị ohere itinye mmekọrịta - ịmegharị ihe mmewere nwere ike ịkpalite usoro iheomume igwu egwu nke na - eme ka ihe ndị ọzọ na - eme ihe nkiri.
Lelee karịa na usoro iheomume.
Ebe a na- - Ihe ngosi yiri ihe ngosi slide na ngwanrọ ngosi, ma ọ bụ ụzọ dị mfe iji mee ka mmemme na-aga aga ma ọ bụ ọdịnaya dị iche. Tumult Hype na-enye gị ohere ịme ọtụtụ ihe nkiri ka achọrọ, na omume dịgasị iche iche nwere ike ịgbanwe n'etiti eserese site na iji ntụgharị dị mma.
Emelitere: Ekele dịrị William Winter nke Bradenton.com maka nkọwa na ọ bụ ngwa Mac OSX, ọ bụghị ngwa iOS!
Tags: ngwaapụldevelopmenthtml5mama mac os xiosMacOSXsoftwareusoro iheomume
LinkedIn na-ebupụta mmelite nkwado
Piqora: Nchịkọta bara ụba maka Pinterest, Instagram na Tumblr
Aug 27, 2013 na 10: 21 AM
Hype 2 bụ maka Mac OS X, ọ bụghị iOS. E nwere a iOS enyi ngwa na-arụ ọrụ na ya.
Aug 27, 2013 na 10: 34 AM
Daalụ @wwinter: disqus! Emelitere m edemede ahụ ma gbakwunye ekele.